Waa maxay xarunta weerarku? - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Waa maxay xarunta weerarku?
Ma kugu dhacay weerar ka yimid lamaane, xubin qoyska ah ama qof kale oo adiga kuu dhow, ama ma tahay dhibanaha kufsiga ama qaab kale oo weerar galmo ah? Xarumaha weerar waxay bixiyaan caawimada caafmaad iyo la talin. Uma baahnid gudbin oo adeegu waa bilaasha. Waxaad heli doontaa caawimo iyaddoo loo eegin haddii aad rabto ama aanad rabin inaad ka warbixiso weerarka booliska. Xarumo gaar ah ayaa furan 24/7.
Adeegu waxa uu ka koobanyahay:
la talinta gudaha deegaan badbaado ah
baadhitaanka caafimaad si loo baadho, loo daweeyo oo looga hortaggo dhaawacyada iyo caabuqa
baadhitaanka jidhka si loo suggo caddayn
ka caawinta la xidhiidhka booliska
ka caawinta la xidhiidhka qareenka (bilaash) iyaddoo la eegin warbixinta
macluumaadka ku saabsan adeegyada, xarumaha gabboodka dhinta iyo meelaha kale si caawimo loo helo.
Waxaad go’aansataa haddii aad ka faa’iidaysato dhammaan ama qayb ka mid ah adeegyada, iyo qof ayaa ku raaci kara haddii aad rabto. Waxaad ka heli kartaa caawimo, xataa hadduu weerarka uu dhacay muddo ka hor.
Shaqaalaha ka shaqaynaya xarunta weerarka waxay ka kooban yihiin dhakhaatiir, kalkaalisooyin iyo shaqaalaha bulshada. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaadaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, laga reebo haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Xafiisyada la talinta waalidka waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Xarumaha weerarka waxay ku xidhanyihiin rugaha gurmadka ama cusbitaalada oo waa qayb ka mid ah adeegyada caafimaadka dadwaynaha.
> Liiska xarumaha weerarka ee Norway
Haddii ay adiga kugu adagtahay xarunta weerarka ee adiga kuugu dhow (tusaale, sababtoo ah xaaladaha jawiga hawada oo aad u darran ama fogaan dheer), waxaad la xidhiidhi kartaa rugta gurmadka. Rugta gurmadka ayaa adiga ku caawin doonta. Qaar ka mid ah rugaha gurmadka sidoo kale waxay samayn karaan baadhitaanada dhaawaca si loo suggo caddayn. Wac 116 117 macluumaadka ku sabasan rugta gurmadka kuugu dhow.
Jariidada Aftenposten waxay ka samaysay fiidyow xarunta weerarka oo ku taala Oslo taas oo muujisa sida dhibanaha weerarka loo soo dhaweeyo iyo adeegyada ay yihiin kuwa la siiyaa.
Liiska goboleed ee xarumaha weerarka